Misi inogona kuitika yeWWDC 2018 uye yayo yekutanga Keynote | IPhone nhau
Mazuva anogona kuitika eWWDC 2018
Pakati penguva ino gore rapera, Apple yakazivisa chiitiko chayo chikuru chegore, iyo Musangano Wepasi Pose Wevagadziri (WWDC). Musangano uyu unogashira zviuru zvevagadziri gore rega uye, kunyangwe pasina ziviso yepamutemo, zvese zvinoratidza kuti zvichaitika June 4-8, 2018 paMcEnery Convention Center muSan Jose. Musangano uyu unowanzoitika muna Chikumi, uye mamwe masvondo emwedzi iwoyo akatochengeterwa, saka panenge pasisina mikana.
Apple inoita kunge inodzokorora mamiriro muSan Jose, kurasa mukana wekubata iyo WWDC muApple Park. Kudzokera kuSan Jose, mushure memakore akawanda kudaro, inobvumira vashanyi veApple nevashandi kuti vave padyo nekambasi nyowani (ingangoita makiromita gumi).
Gore rino tinotarisira kuona kuratidzwa kwe iOS 12 yakanangana nekuvandudza mashandiro Apple's mobile operating system, ichiita kuti vazhinji vaidaidze kuti "Snow Leopard yeIOS." Padivi reMac, isu takamirira kusvika kwe macOS 10.14 (uye zita idzva). Uye, zvakare, isu tinogona kutarisira kuratidzwa kwe WatchOS 5 -iyo nguva inopfuura- yeApple Watch, pamwe ne tvOS 12 yeApple TV. Uye zvakare, pane zvinogara zvichiziviswa uye nhau nezve zvimwe zvinhu zve software, senge HealthKit.
Tinogona kurota nezve mharidzo kana nyepera yepamusoro yeMac Pro nyowani, yatave kutoziva kuvapo kwayo, uye chinangwa chekuva pfungwa nyowani yeMac Pro, isina kufanana ne "marara anogona" uye yakafanana neaya ekare, sezvo iri modular.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti wekupedzisira Keynote auya navo kuratidzwa kwechimwe chigadzirwa chehardware, isu tichiri muna Kukadzi 2018, saka imwezve mharidzo inogoneka pamberi peWWDC. IPads nyowani kana runyerekupe rwe iPhone SE 2 ndivo vanokwikwidza pane ino mharidzo munaKurume pamberi peWWDC
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mazuva anogona kuitika eWWDC 2018
Twitter inobvisa kushanda kwayo kubva kuMac App Store zvachose
Apple Watch's SOS Emergency ficha inoponesa hupenyu hwemukadzi uye wake wemwedzi 9-mwedzi